Opes စျေး - အွန်လိုင်း OPES ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Opes (OPES)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Opes (OPES) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Opes ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Opes တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Opes များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OpesOPES သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000914OpesOPES သို့ ယူရိုEUR€0.000778OpesOPES သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000698OpesOPES သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000837OpesOPES သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00822OpesOPES သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00579OpesOPES သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0204OpesOPES သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00342OpesOPES သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00122OpesOPES သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00127OpesOPES သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0205OpesOPES သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00708OpesOPES သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00501OpesOPES သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0684OpesOPES သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.154OpesOPES သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00126OpesOPES သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00138OpesOPES သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0284OpesOPES သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00635OpesOPES သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0969OpesOPES သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.08OpesOPES သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.354OpesOPES သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0671OpesOPES သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0253
OpesOPES သို့ BitcoinBTC0.00000008 OpesOPES သို့ EthereumETH0.000002 OpesOPES သို့ LitecoinLTC0.00002 OpesOPES သို့ DigitalCashDASH0.00001 OpesOPES သို့ MoneroXMR0.00001 OpesOPES သို့ NxtNXT0.0681 OpesOPES သို့ Ethereum ClassicETC0.000129 OpesOPES သို့ DogecoinDOGE0.258 OpesOPES သို့ ZCashZEC0.00001 OpesOPES သို့ BitsharesBTS0.0332 OpesOPES သို့ DigiByteDGB0.0293 OpesOPES သို့ RippleXRP0.00301 OpesOPES သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 OpesOPES သို့ PeerCoinPPC0.00296 OpesOPES သို့ CraigsCoinCRAIG0.405 OpesOPES သို့ BitstakeXBS0.0379 OpesOPES သို့ PayCoinXPY0.0155 OpesOPES သို့ ProsperCoinPRC0.112 OpesOPES သို့ YbCoinYBC0.0000005 OpesOPES သို့ DarkKushDANK0.285 OpesOPES သို့ GiveCoinGIVE1.93 OpesOPES သို့ KoboCoinKOBO0.203 OpesOPES သို့ DarkTokenDT0.000842 OpesOPES သို့ CETUS CoinCETI2.57